ပံ့ပိုးမှု Holmes SK ကို (အခမဲ့) သငျသညျဆှီဒငျဂိမ်းကစားသည့်အခါ! | Holmbygden.se
ပံ့ပိုးမှု HSK ဒီမှာဆွီဒင်ဂိမ်းမှာသင့်ရဲ့ဂိမ်းမှတ်ပုံတင်ရန်!
သငျသညျတစ်ခါတစ်ရံတစ်ဦး TIA-တွေအများကြီးမဝယ်သို့မဟုတ် Stryktipset ပေါ်မှာကစားခဲ့လျှင်, အဆိုပါအလေးသာ, အသင့်ပင်လယ်ဓားပြ, Lotto, ဆှီဒငျဂိမ်းများ၏ Poker သို့မဟုတ်အခြား? ယခုတွင်သင်သည်တစ်ပြိုင်နက် Holmes SK ကိုထောကျပံ့နိုငျ!
ဆွီဒင်အားကစားပြိုင်ပွဲအတွက်လို့ခေါ်တဲ့အိုးဖြစ်ပါသည် “မြက်အမြစ်” မြေတပြင်လုံးပေါ် 50 သန်းနှင့်သူတို့ကစားသည့်အခါသူတို့က Holmes SK ကိုထောကျပံ့ပေးချင်ကြောင်းလက်မှတ်ထိုးသူကိုပိုပြီးလူတွေ, ကလပ်ပိုမိုအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူ – အဆိုပါကစားသမားမှလုံးဝအပိုကုန်ကျစရိတ်!
ဘဏ္ဍာကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မည်ကို ပို. – နောက်ထပ်ဖြန်!
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကအဆိုပါကလပ်အကြောင်းကိုတယ် 3500 အားဖြင့် SEK 32 ပိုပြီးဖြစ်သင့်ပါတယ် pc HSK ထောက်ခံသူတွေနဲ့ဒီနှစ်!
သငျသညျ play သူကိုဆွေမျိုးသားချင်းသို့မဟုတ်မိတ်ဆွေပါနဲ့!? သို့သွားစေခြင်းငှါမေးပါ holmssk.se/spela နှင့်၎င်းတို့၏ဂိမ်းမှတ်ပုံတင်ရန်.
facebook ပေါ်တွင်လည်းဒီ share ပေးပါ, twitter m.m.
ဘယ်လိုတဦးတည်း Holmes SK ကို supporting ကိုစတင်ထားဘူး?
alt. 1: သင် Holmes SK ကိုထောက်ပံ့သောကဒီမှာ sign up ပြုလုပ်. ထိုအခါကိုကလစ်နှိပ်ပါ “အကြှနျုပျ၏ထောက်ခံမှု” စာမျက်နှာပေါ်တွင်. သငျသညျပြီးသားတဦးတည်းရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်ထိုအခါအတွက်လက်မှတ်ထိုးတစ်ခုသို့မဟုတ်ရဲ့ login ဖန်တီး.
alt. 2: သင် Holmes SK ကိုထောကျပံ့ပေးချင်သောကစားနေသည့်အခါဒါဟာစတိုးဆိုင်အားဆင့်ဆိုရမည်မှာဖို့လည်းဖြစ်နိုင်.
သငျသညျတခါ Holmes SK ကို supporting အဘို့အသငျသညျက register လုပ်သွားမှသာ, ထို့နောက်အလိုအလျှောက်ပြုလုပ်!
သင့်ရဲ့ထောက်ခံမှုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! /Holmes SK ကို
Stor risk för gräsbrand i snöfria områ... ဆက်ဖတ်ရန်